Umhla My Pet » Indlela Fumana kwi axa Love?
Kukho ixesha xa wena kunye nomyeni wakho okanye umhlobo inkwenkwe ayikwazanga ukugcina izandla ngamnye ezinye, kodwa ngoku izinto zitshintshile kwaye ngenkankulu uzive ngathi ukwenza uthando. Ngaba oku Ndifana imeko nina ngoku? Ukuqinisekisa ukuba wonwabe kangangoko ebenawo neqabane lakho ngaphambili, bafunde njani ukufumana le axa uthando.
Yenza ogqibeleleyo mbiance
izibini ezininzi ngexesha ekuqaleni ulwalamano lwabo kufuneka nje kwikona yabucala zabetha egqibeleleyo ukwenziwa uthando mood. nokuba, njengoko ubudlelwane ekhula, wahluma kokulahlekelwa charm ebesikade kusetyenziswa nilime. Ukuba le mbiance ekunene inokunceda abantu ukuba bangene axa uthando lula.
Unako itrayi dimming izibane kwigumbi lakho kwaye ukubeka umculo uthando kwi. Qiniseka ukhuko lwakho lungabi neenkcukacha; abantu abaninzi nje ndizive uthando kwindawo lixelegu. Musa ukuvumela lokulala yakho kuba shushu kakhulu okanye abandayo njengoko zombini kunokuba turnoffs ngephanyazo. Ukuba inkqubo air conditioning okanye ukufudumeza efakiweyo, lungise. Ukuvula okanye windows lokuvala zinokukunceda xa normalizing ubushushu lokulala yakho uze wenze indawo efanelekileyo bokufumana ayizukuba.
Uxinezeleko yenye ezingunobangela oqhelekileyo drive sex yancitshiswa. manani Kutshanje ifunyenwe kutyhila ukuba ngeenxa 15% amadoda libido eliphantsi ikakhulu ngenxa yoxinezeleko abanazo ebomini. Testosterone le ncindi olulawula drive ngesondo ngabantu. Njengoko umntu ekhula (30 okanye ngaphezulu), kumgangatho wakhe testosterone liqalisa lisihla; uxinezeleko ichukumisa imveliso cortisol kwaye unciphisa kumgangatho wakhe testosterone ngakumbi. Ngoko ke, indoda wazihlupha uxinezeleko lidla libido ngaphantsi namanye amadoda yobudala bakhe.
Ukuba ufuna bubuyiselwe yintlantsi kwaye ufuna ukungena axa uthando njengoko okungacwangciswanga njengoko isetyenziswa ukwenza iminyaka embalwa emva, kuya kufuneka ukuba afumane iindlela ukubulala uxinezeleko iqabane lakho ojamelene yaye kwangaxeshanye bafumane wena de-wagxininisa. Ngokunqwenelekayo, kufuneka uncedo omnye komnye kwi kuphinda imvakalelo wobunye ngokutywatyuswa uxinezeleko. Mnike myalezo uze umcele ukuba babuye bakumeme, ndihlambe eshushu kunye, ukulungiselela isidlo kunye, nihambe uhambahambe egadini emva kwesidlo; zonke ezo zinto ziya kukunceda wena kunye neqabane lakho ukuba siphumle yaye baye ogqibeleleyo ukwenziwa uthando mood.
Qinisekisa ukuba uziva sexy
Ukuba uziva ngathi ukwenza uthando, kufuneka kuqala uzive sexy. Ukuba akuqinisekanga ngendlela ukhangela ngenxa ubunzima kuwe azuzwe kwiminyaka embalwa edlulileyo, bazame u kubetha ejimini kwaye siphulukane kuyo. Oku kuya kwenza ukuba nentembelo ngakumbi kwaye kwakhona uya kuqalisa ukuziva sexy. Unako kwakhona ungazama ngerie entsha, kodwa qiniseka ukuba awunangxaki kuwo; oku kubangelwa intuthuzelo kwakhona ebaluleke kakhulu uziva sexy.
Ukuze ufumane kwi axa uthando, kufuneka wenze izinto eziya kuzitshabalalisa isithukuthezi kulwalamano lwakho. Xa ulwalamano lwakho uba umdla, akuyi kuba nzima ukufumana kwisakhelo sengqondo ukwenza uthando.